News Collection: 'कार दुघर्टनाले झस्काइरहन्छ'
'कार दुघर्टनाले झस्काइरहन्छ'
१. ल्हासामा सुन छ कान मेरो बुच्चै
किशोर कुमारको गीत 'सागर कितना मेरे पास है, मेरे जीवनमे फिर भी प्यास है'मा भनेझैं कहिलेकाहीँ आवश्यक परेको कुरा पाउन क्षमताले नभ्याउँदो रहेछ।
२. अगुल्टोले हिर्काएको कुकुर बिजुली देखी तर्सिन्छ
पाँच वर्षअघि कोरियामा मेरो कार दुघर्टना भएको थियो। त्यसैले कहिलेकाहीँ मलाई गाडी कुदाउँदा त्यो घटना याद आइहाल्छ। मलाई त्यस घटनापछि गाडी चलाउँदा डर लाग्छ। मानिसलाई पनि पुराना कुराले भयभित बनाउँछ।
३. अकबरी सुनलाई कसी लाउनु पर्दैन
मानिसमा भएको क्षमतालाई लुकाउन सकिन्न। जोसँग क्षमता छैन, उसले धेरै नखरा गर्छ। जबकि राम्रो कुरालाई जति नराम्रो देखाउने प्रयास गरे पनि सम्भव हुँदैन।
४. अजिंगरको आहारा दैवले जुराउँछ
मानिसको आहारा पनि भगवानले पुर्‍याइदिन्छ। संसारको सृष्टि भएपछि विभिन्न जीवको रहनसहनको व्यवस्था ईश्वरले गरिदिएका छन्। हामीले कसरी बाँच्ने भन्नेमा चाहिँ अन्तर हुनसक्छ।
५. आगो ताप्नु मुढाको कुरा सुन्नु बूढाको
जाडोमा मुढाको जस्तो ताप अरू पातपतिङ्गरले दिन सक्दैन्। त्यस्तै बूढाखाडाको भनाइ पनि सही हुन्छ। उनीहरूले भनेका कुरा जहिले पनि मिलेकै हुन्छ। भनिन्छ, ओल्ड इज गोल्ड।
६. कामकुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर
कहिलेकाहीँ मान्छेलाई आफूले गर्नु पर्ने वास्तविक काम थाहा हुँदैन। जीवनको गन्तव्य थाहा नपाउन्जेल मान्छे अलमलिन्छन् भने गन्तव्य थाहा पाउँदासम्म ढिलो भइसकेको हुन्छ। त्यसैले बैलैमा आफ्नो गन्तव्य ठम्याउन सके पछुताउनु पर्दैन।
७. जब राती बूढी ताती
यो उखान मेरो वास्तविक जीवनमा पनि मेल खान्छ। सुरूमा काम गर्न अल्छी लाग्छ। अन्तिम अवस्थामा सबैतिर चटारो पर्छ। के गर्ने भनेर अत्तिनु पर्ने हुन्छ। त्यसबेला अरूको सानो सहयोगले ठूलो अर्थ राख्छ। कतिपटक त कामहरू बिग्रिएका पनि छन्।
८. खाने मुखलाई जुँगाले छेक्दैन
पसिनामा तागत हुन्छ। त्यसैले जो मान्छे मिहेनत गर्छ, उसले अवश्य सफलता पाउँछ। आफूमाथि विश्वास लिएर काम गरे संसार जित्न सकिन्छ।
९. हात्ती छिर्‍यो पुच्छर अड्कियो
मैले भर्खर गरिरहेको 'मिस यु' फिल्मको सुटिङसँग यो उखान मेल खान्छ। अन्तिम अवस्थामा फिल्म सिध्याउन समस्या भइरहेको छ। सबैको समस्याले गर्दा फिल्मको काम अड्किएको छ।
घाँटी नहेरी हाड निल्ने मान्छे फिल्म क्षेत्रमा धेरै छन्। कति लगानी गर्दा आफूलाई फाइदा हुन्छ? सोच्दै नसोची लगानी गर्छन् र पैसा नउठेपछि फिल्म क्षेत्र नै नराम्रो भन्न थाल्छन्।